Papa m tụfuru nwa ya n'ọrịa cancer, malite ọrụ ebere iji bufee ụmụaka gaa Chemo - Ụwa 2022
Papa m tụfuru nwa ya n'ọrịa cancer, malite ọrụ ebere iji bufee ụmụaka gaa Chemo
Richard Nares chere egwu kacha njọ nke nne na nna mgbe nwa ya nwoke bụ Emilio chọpụtara ọrịa leukemia na 1998 wee nwụọ n'ọrịa ahụ afọ abụọ ka e mesịrị. Mana o jisiri ike gbanwee iru uju ya ka ọ bụrụ ọrụ ebere site n'inyere ọtụtụ narị ezinụlọ aka iche ihe ịma aka ndị siri ike nke ọrịa nwata ihu, site n'inye ha ebuli.
Mgbe nwa ya nwoke nwụsịrị, ọ laghachiri n'ụlọ ọgwụ Rady Children's Hospital na San Diego wee jụọ ndị ọrụ ka ọ ga-esi nyere ndị ọzọ aka. Azịza ha: njem.
Ụmụaka a chọpụtara na ha nwere ọrịa kansa na ezinụlọ ha ga-emerịrị njem dị anya na ugboro ugboro iji nweta ọgwụgwọ, dị ka chemotherapy. Otu ezinụlọ Richard zutere bi 120 kilomita site n'ụlọ ọgwụ. Onye ọzọ na-aga ụlọ ọgwụ ugboro isii n'izu ma o nweghị ụgbọ ala.
Maka ụfọdụ ụmụaka, ọgwụgwọ chemotherapy caustic na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ gharazie ike nke na ha enweghị ike ịnya ụgbọ njem ọha na-ebu nje.
Ọtụtụ ndị nne na nna enweghị ohere iwepụta oge akwụghị ụgwọ n'ọrụ. A na-amanye ụfọdụ ezinụlọ nwere naanị nne ma ọ bụ nna ịhọrọ n'etiti iziga nwa ha na-arịa ọrịa na bọs ka ọ bụrụ naanị ọgwụgwọ chemotherapy ma ọ bụ ịhapụ ụmụnne ha n'enweghị nlekọta.
Ọ chọpụtara na ọtụtụ ụmụaka na-agba ụgbọ ala ihe karịrị awa 4 na-aga ma na-esi n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ, nke ka njọ, na-ahapụ ọgwụgwọ ndị dị mkpa kpamkpam.
Ọ bụ ezie na Richard na Emilio na-agba ịnyịnya na nkwado ezinụlọ n'oge ọrịa Emilio na-arịa, Richard hụrụ ka ọrịa kansa siri ike n'ọtụtụ ezinụlọ ndị na-enweghị ego ma kpebie ime ihe.
"Ọ siri ike nke ukwuu, ọ bụghị naanị n'ụzọ mmetụta uche, mana ugbu a n'ụzọ ego," ka o kwuru. "Mgbe ụfọdụ, ma nne na nna ga-ahapụ ọrụ ha ma ọ bụ belata nke ukwuu. Ụfọdụ… enweghị (ihe) ọzọ $10 iji kwụọ ụgwọ maka nri cafeteria."
Na mmalite, ọ na-ebugharị gburugburu ebe dị na Buick ya, na-enye ezinụlọ na-agba ịnyịnya na ụlọ ọgwụ, ma n'oge na-adịghị anya, arịrịọ ndị ọzọ bịara. Site n'enyemaka nke ndị nọọsụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ, ọ malitere Emilio Nares Foundation iji gbasaa ọrụ ya n'ime a. usoro mmemme, aha ya bụ Ride With Emilio.
Ugbu a, Emilio Nares Foundation na-enye ụmụaka na ezinụlọ 2,500 njem n'efu otu afọ n'ụlọ ọgwụ dị na Southern California. Ntọala ahụ na-enyekwa nkwado nye ezinaụlọ na-enye nkwado ndị ọrịa na-asụ asụsụ abụọ, na ọbụna ọnwụ na nkwado olili.
Ndị dọkịta na-awa ndị United States na Onye isi ala Barack Obama anabatala Ride With Emilio dị ka ọmụmụ ihe nlereanya. N'oge na-adịbeghị anya, a họpụtara Richard ka ọ pụta ìhè na usoro CNN Heroes.
Ugbu a, Richard na-agba ọsọ site na Golden Gate Bridge na San Francisco gaa n'ụlọ ọgwụ Rady's Children na San Diego inye ego maka ntọala ya.
N'agbanyeghị na ọ nwere ike ịbụ dike, Richard na-eritekwa uru n'ọrụ ya. Inyere ndị ọzọ aka na-eme ka ọ bịarukwuo nwa ya nwoke nso.
"Ọ bụ n'ezie ike," Nares kwuru. "N'agbanyeghị na ọ nwụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 13, ọ ka dị ka ọ nọnyeere m. Dị ka ọ ka nọ n'ubu m ma ọ bụ na-adọpụ ntị m dị ka ọ na-emebu."
Gaa na Emilio Nares Foundation ka ịmatakwu gbasara ọrụ ya.